Faah faahin Kulan shalay ku dhexmaray Muqdisho R/W Farmajo iyo Un-ka – SBC
Faah faahin Kulan shalay ku dhexmaray Muqdisho R/W Farmajo iyo Un-ka
Wasiirka Koowaad ee Dowlada KMG Somalia Maxamed C/laahi Farmaajo iyo u qaabilsanaha Arimaha Gargaarka iyo Binaadannimada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa kulan balaaran oo ay saxaafadu dibad joog ka aheyd waxa ay shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaasoo ay kaga hadleen arimo ku taxaluqa Gargaarka dadka tabaaleysan ee Somalia.
Wasiirka Iskaashiga iyo xiriirka Caalamiga ah ee DKMG ah ayaa saxaafada u sheegay in kulanka ay yeesheen Raiisul wasaaraha iyo Mark Bowden ay kaga hadleen arimo badan oo ku aadan sidii qaramada midoobay ay gargaar deg deg ah u soo gaarsiinlaheyd dadka iyagu ku tabaaleysan qeybaha kala duwan ee dalka Gaar ahaan magaalada Muqdisho .
Waxa uu wasiir C.qani Maxamed Cali intaasi ku daray in sidoo kale kulankaasi looga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka DKMG ah ee Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay u dhexeya si ay si aan kala go’laheyn ay uga howlgasho gudaha dalka .
Waxa uu raiisul wasaare Farmaajo ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gar gaaro dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo hareeraheedaba kuwaas oo uu sheegay in meeshii ugu xumeed ay ka mareyso.
Kulankan iyo Imaatinka Uqaabilsanaha Arimaha Gargaarka ee Q M Mark Bowden gudaha Muqdisho ayaa waxa ay ku soo aadayaan xili dhowaan uu Raiisul wasaaraha DKMG ah Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo uu 90 Maalmood u qabtay Hay’adaha Samafalka iyo kuwa qaramada Midoobay in ay ku soo gar gaaraan dadka ku tabaaleysan dalka.